तीज अवार्डमा के के भयो ? (भिडियो सहित) « Mazzako Online
तीज अवार्डमा के के भयो ? (भिडियो सहित)
मज्जाको अनलाईन, भदौ २६ गते, शनिवार, २०७२, काठमाण्डौं ।
छायाँ छवि क्रियशनको आयोजनामा शुक्रबार राजधानीमा तीज म्युजिक अवार्डको दोस्रो संस्करण सम्पन्न भएको छ । तीजको महत्व र महिमालाई मध्यनजर गर्दै तीजमा आफ्नो मौलीकता जोगाउने तथा तीजका गीतहरुमा विकृति विसंगतीलाई हटाउदै सच्चा स्रष्टाहरुलार्य सम्मान र प्रोत्साहनका लागि आयोजना गरिएको यस अवार्ड कार्यक्रममा नेपाली लोक गीत संगीत क्षेत्रदेखि लिएर चलचित्र क्षेत्र तथा हाँस्यब्यंग्य क्षेत्रका कलाकारहरुको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
यस पटकको अवार्डमा उत्कृष्ट तीज दोहोरी गायिकाको अवार्ड गायिका टिका पुनले उचालिन् भने गायक तर्फ सेल्फी सेल्फीका गायक वसन्त थापा उत्कृष्ट गायक ठहरिएका छन् । शिव हमालको दिदी माइत बोलको गीतले उत्कृष्ट तीज दोहोरी भाकाको अवार्ड उचाल्यो । त्यस्तै हरि खत्रीको घुम्दै आयो बोलको गीतले उत्कृष्ट शब्द, ब्रत बसेको बोलको गीतबाट उत्कृष्ट एरेन्जर झलक संगीतम, उत्कृष्ट तीज गीत म्यूजिक भिडियो निर्देशन तर्फ प्रकाश भट्टले अवार्ड हात पारे । त्यस्तै कोरियोग्राफर शंकर विसीले उत्कृष्ट कोरियोग्राफरको अवार्ड उचाल्न सफल भएका छन् ।
पत्रकार डब्बु क्षेत्रीले माइती घरमा बोलको गीतका लागि उत्कृष्ट संन्देशमुलक तीज गीतको अवार्ड प्राप्त गरे भने नव गायिकाको अवार्ड कल्पना कुशुमलाई प्रदान गरियो। विजय थापा र रश्मी तामाङले उत्कृष्ट मोडल, जीवन सेन्चुरी उत्कृष्ट सम्पादक, ज्ञानेन्द् शर्माले उत्कृष्ट छायाँकारको अवार्ड उचाल्न सफल भएका छन् । यो वर्षको उत्कृष्ट तीज गीतको अवार्ड दिदी माइत बोलको गीतले उचाल्न सफल भएको छ । गायिका सुनिता दुलाललाई उत्कृष्ट तीज गीत गायिकाको अवार्ड प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै, पब्लिक च्वाईस अवार्ड गायिका साहिमा श्रेष्ठ र गायक सन्दीप न्यौपानेले प्राप्त गरेका छन् भने प्रोत्साहन अवार्ड सुनिता गुरुङ्लाई प्रदान गरिएको छ । पपुलर अवार्ड भने सेल्फी सेल्फी गीतले प्राप्त गरेको छ ।
तीज अवार्ड कार्यक्रममा तीजका गीतमा नृत्य देखि लिएर दिपक दिपा र माग्ने बुढाको कमेडी डान्स अनि गायिकाहरुको तीज भाका पनि लाईभ प्रस्तुत गरिएको थियो ।